Wada-hawlgalayaasha Shirkadaha & Mu'asasada - Sinnaanta Helitaanka International
Maanta in ka badan sidii hore, macaamiisha iyo shaqaaluhuba waxay dalbayaan shirkado inay daryeelaan shaqaalahooda, kana qeyb qaataan dhaqamada silsiladaha lagu bixiyo, oo gacan ka geysta bulshooyinka ay ka ganacsadaan kana dhigaan adduunka meel fiican.
Shirkaduhu waxay iskaashi la leeyihiin EAI si ay u dardar geliyaan saameyntooda iyada oo loo marayo barnaamijyo wax ku ool ah oo saameyn ku leh bulshada dhexdeeda noocyo kala duwan oo ah dhinacyada saameynta la leh ee muhiimka ah. Waxaan u waafajinaynaa qaabkeena, khibradeena iyo juqraafi ahaan ujeedadaada ganacsi annaga oo hubinayna in soo laabashada maalgashiga barnaamijyadeena aan horumarinno. EAI waxay lashaqeeysaa barnaamijyo iskaa wax u qabso ah oo shaqaale si ay u siiso fursado iskaa wax u qabso ah oo nolosha is beddelaya. Bal qiyaas dareenka ujeedka uu shaqaaluhu leeyahay isaga oo jabsada qaar ka mid ah kuwa ugu adag ee xalinta dhibaatooyinka warbaahinta bulshada, warbaahinta dhaqanka, iyo meelaha farsamada. Kaliya maahan mid kobcinta dareenka shaqsiyadeed ee qancinta shaqaalaha waxay fursad uhelaan inay ku dabaqaan xirfadahooda qaab wax u badali doona mararka qaarna badbaadin kara nolosha.
Wadashaqayn lala yeesho EAI waxay awood u siineysaa ganacsi inuu tijaabiyo hal-abuurka cusub ee deegaannada kaladuwan ee aadka u kaladuwan si loo sahmiyo habka ugu wanaagsan ee lagu cabiri karo alaabada. Ganacsiyada ayaa nala shaqeeya si ay u soo jiidaan dhaqdhaqaaqyo dhaqameed bulsheed ay bulshada ku hagayso isbedello olole si ay wax uga qabato dhaqan gaar ah oo suuqa la siiyo waxayna nagala shaqeeyaan sidii aan u wada qaban lahayn barnaamij wax ka qabanaya caadooyinka bulsheed ee horjoogsanaya qaadashada wax soo saarka shirkadaha. Ayadoon loo eegin dhiirigelinta EAI waxay xirfad u leedahay horumarinta barnaamijyada saameynta istiraatiijiyadeed ee u oggolaaneysa labada qayboodba inay gaaraan ujeeddooyinkooda.
Waxaan aaminsanahay inay shirkaduhu u baahan yihiin inay la shaqeeyaan waaxda bulshada si ay uga baxaan dhibaatooyinka adduunka. ”Sir Richard Branson, Kooxda Virgin
EAI waxay la shaqeysaa aasaasyada qoyska yar yar, aasaaska shirkadaha, iyo asaasiyado waaweyn oo ay ku soo bandhigaan noloshooda saameynta ay ku leeyihiin meelaha muhiimka ah. Waxaan ku xeel dheer nahay inaan hubinno inaan la kulanno shuruudaha kaabayaasha aasaasiga ah isla markaana aan horumarinno cabbir dhammaystiran, qiimeynno iyo qorshayaal waxbarasho annagoo la kaashaneyna kooxahooga.
EAI waxay awood u siineysaa aasaaska si loo dardar geliyo himiladooda loona abuuro saameyn sare oo wax ku ool ah isdhexgalka warbaahinta. Waxaan awoodnaa inaan la shaqeyno aasaaska jawi xasaasi ah oo wax ka qabanaya maadooyinka xasaasiga ah iyadoo loo marayo qaab aan mucaarad ahayn oo barnaamijyo ah oo lagu daydo dabeecado cusub oo ku saabsan arrimaha rabshadaha, sinnaanta jinsiga, hoggaaminta, ka-qaybgalka dhalinyarada iyo waxbarashada Waxaan abuurnaa jawi suurta geliya anagoo abuureyno jilayaal kujira sawiradeena saabuunta iyo waxqabadyada masraxa waddooyinka ee nolosha u keenaya habab cusub oo ahaansho - habab caafimaad qab ahaansho
Waxaan abuurnaa isbedel ballaaran iyadoo loo marayo barnaamijyadayada isgaarsiinta dhaqanka bulshada waxaanna u saamaxeynaa aasaaska saameynta caadooyinka cusub ee bulshooyinka halista ku jira.
La xiriir Catherine Scott, Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga, oo ku taal websaydhka ganacsiga: horumarinta ganacsiga iyo ganacsiga si aad u sahamiso wada shaqeynta.